Karma Tantric - RUBPAGE // Muviri Rubha / NuRu Eotic Massage
Iyo Yekutanga Tantric Massage muLondon
Nhoroondo yechokwadi yeClassic Tantric Massage, yakavanzika tantra nzira yakapfuura nemumazera mazhinji. Yedu yeClassic Tantric masaja enyama anoguma nekuputika kwesimba, kuchiteverwa nekunakirwa kwemuviri nepfungwa.
Iyi tsika inoyevedza ine zvakawanda zvepanyama uye zvepfungwa, nyanzvi yedu yekumasseuse iri muLondon ichakugamuchira munzvimbo tsvene yerunyararo, yakakomberedzwa nemakenduru nemumhanzi unodzikamisa. Ziva iyo yakasarudzika ekare eroottinen tantric massage uye sunungura kushushikana kwako mugungwa remafuta anodziya paganda rako.
Fonera Karma Tantric pa0207 898 3212
Yedu yakasarudzika tantric masaja iganda rakazara kune ganda rinomutsa muviri kukwiza uchishandisa nyama yekudziya inodziya yemafuta.
Muviri wakazara wekusimbisa muviri kutanga nemiromo mirefu yekuyerera kwekunetseka, zvichitungamira kumagumo anofara uchishandisa matekiniki echokwadi.
Masseuse edu anopa incalls kune avo ega emhando yepamusoro mafurati muCentral London kana kusheedzera kune yako Central London hotera kana wega wega pekugara. Wona yedu Nzvimbo Peji kune runyorwa lwenzvimbo dzatinofukidza.
Mitero yeLadies inosiyana uye inogona kuwanikwa pane avo maprofiles.
Mutsetse wedu wekubhuka wakavhurwa kubva Muvhuro kusvika Mugovera pakati pa9 am-1am. Kana uchida iwe unogona kutitumira email, Whatsapp, Skype, kana kushandisa yedu kuonana chimiro kupinda mukubatana.
Muvhuro: 8:00 AM – 10: 30 PM
Chipiri: 8:00 AM – 10: 30 PM
Chitatu: 8:00 AM – 10: 30 PM
China: 8:00 AM – 10: 30 PM
Chishanu: 8:00 AM – 10: 30 PM
Mugovera: 8:00 AM – 10: 30 PM
Svondo: 8:00 AM – 10: 30 PM